လားရှိုးသိန်းအောင်ရဲ့ တကိုယ်တော်ည | ဧရာဝတီ
မေစစ်ပိုင်| January 23, 2013 | Hits:3,217
6 | | “ပိုသေးလား၊ လိုသေးလား၊ ပိုရင်ဝယ်တယ်၊ လိုရင်ရောင်းပေးမယ်” ဆိုတဲ့ လက်မှတ်မှောင်ခို ရောင်းချနေတဲ့ အသံတွေနဲ့ ဆူညံ နေတာကတော့ ဇန်နဝါရီ ၁၉ ရက်က ရန်ကုန် မင်းဓမ္မလမ်းပေါ်က Myanmar Convention Center (MCC) ခန်းမ ကွင်းပြင်မှာ ကျင်းပတဲ့ လားရှိုးသိန်းအောင်ရဲ့ တကိုယ်တော် ဖျော်ဖြေပွဲမစခင် အဝင်ဝမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တရားဝင် လက်မှတ် အရောင်းကောင်တာက ရှိုးပွဲလုပ်မယ့် နေရာမှာ မရှိတော့ ရှိုးပွဲတာဝန်ကျ လုံခြုံရေး ဝန်ထမ်းတွေက မှောင်ခို လက်မှတ်ရောင်းသူတွေ ဆီကိုသာ လမ်းညွှန်တဲ့ အတွက် ပွဲကိုလာကြည့်ကြတဲ့သူ အများစုကလည်း လက်မှတ် ဝယ်မရတာကြောင့် မှောင်ခို သမားတွေနဲ့ ဈေးညှိ ဝယ်ယူနေကြတယ်။
တချို့ နိုင်ငံခြားသားတွေလည်း မှောင်ခိုတွေနဲ့ ဈေးစကားပြောရင်း လက်မှတ် ဝယ်ယူနေကြတာကို တွေ့ရတယ်။
လက်မှတ်မှောင်ခို ရောင်းချသူတွေ၊ ရေသန့်၊ အစားအစာတွေ၊ လျှပ်စစ်မီးဆိုင်းငယ် တွေကို ရှိုးပွဲလာ ပရိသတ်တွေဆီ အလုအယက် ရောင်းချနေတဲ့ ဈေးသည်တွေကို ကျော်ဖြတ်ပြီး ရှိုးပွဲရှိတဲ့ ကွင်းပြင်ကြီးကို ရောက်ခဲ့တယ်။
ရှိုးပွဲလုပ်မယ့် ကွင်းပြင်ထဲမှာတော့ စားသောက်ဆိုင်ခန်းတွေ၊ အကင်ဆိုင်တွေ၊ ဝိုင်အရောင်းကောင်တာ တွေနဲ့ စည်စည် ကားကား ရှိနေခဲ့တယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၃၀ ကျော် လောက်ကတည်းက မြန်မာနိုင်ငံကနေ အမေရိကန်နိုင်ငံကို ရောက်ရှိ နေခဲ့တာကြောင့် ပရိသတ်တွေနဲ့ အဆက်အသွယ် ပြတ်နေခဲ့တဲ့ လားရှိုးသိန်းအောင်ရဲ့ ရှိုးပွဲမှာ အသက်ကြီးပိုင်း အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတွေက တခဲနက် အားပေးဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားကြပုံ ရပါတယ်။
ရှိုးပွဲ မစတင်ခင် ကတည်းက အသက်ကြီးကြီး အမျိုးသမီးတချို့က “မုန်းမုန်း မေ့မေ့ … မုန်းမေ့ပြီလားလို့ မေးချင်တယ်” “ဘယ်သူ ဘယ်ကို ရောက်နှင့်နေ … ဘယ်လိုဘာပဲ ဖြစ်ပါစေ” ဆိုတဲ့ သီချင်း စာသားတွေကို မတိုးမကျယ် ညည်းဆိုရင်း ပျော်မြူးနေကြတယ်။
စင်မြင့်ရဲ့ ဘေးတဘက်တချက် မှာလည်း လူငယ်တစုက ကောင်းဘွိုင် ဝတ်စုံ အပြည့်အစုံကို ဝတ်ဆင်ပြီး Welcome to Myanmar … Lashio Thein Aung ဆိုတဲ့ စာတန်းငယ် တခုကို ကိုင်ပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်ကြ၊ ပျော်ရွှင်နေကြပါတယ်။
တေးရေး စောခူဆဲတို့ မိသားစု၊ အကယ်ဒမီ မင်းသမီးတွေဖြစ်ကြတဲ့ ခင်ဇာခြည်ကျော်နဲ့ စိုးပြည့်သဇင်၊ အကယ်ဒမီ မင်းသား ရန်အောင်၊ သရုပ်ဆောင် အကယ်ဒမီ ထွန်းထွန်းဝင်း စတဲ့ အနုပညာရှင်တွေလည်း လားရှိုးသိန်းအောင်ရဲ့ တကိုယ်တော် ဖျော်ဖြေပွဲကို လာရောက် ကြည့်ရှုကြပါတယ်။
“ကျမ မင်းသမီး စဖြစ်ချိန်မှာ အန်ကယ်လ် (လားရှိုးသိန်းအောင်) ကလည်း နိုင်ငံခြားကို ထွက်သွားတာဆိုတော့ မမြင်ဖူး လိုက်ဘူး၊ သီချင်းတွေက လည်း နားထောင်ချင်တယ်၊ တွေ့လည်းတွေ့ချင်တာနဲ့ လာကြည့်ဖြစ်တယ်” လို့ မင်းသမီး ခင်ဇာခြည်ကျော်က ဆိုပါတယ်။
ရှိုးပွဲကို ရောက်ရှိလာတဲ့ မင်းသား ရန်အောင်ကလည်း သူတို့ငယ်ရွယ်စဉ်တုန်းက လားရှိုးသိန်းအောင်ရဲ့ သီချင်းသံတွေကို ကြားခဲ့ဖူးတာကြောင့် သံစဉ်တွေကို ကြိုက်သလို၊ အားကျတဲ့အတွက် ကြည့်ဖြစ်တယ်လို့ ပြောပြတယ်။
တကိုယ်တော် ဖျော်ဖြေပွဲက ည ၇ နာရီ စမယ်လို့ကြေညာ ထားပေမယ့် ၇ နာရီခွဲကျော်ကျော်ကျမှ အစီအစဉ် တင်ဆက်သူတွေ ဖြစ်တဲ့ လူရွှင်တော် မေတ္တာနဲ့ ကုသိုလ်တို့ရဲ့ နှုတ်ခွန်းဆက်စကားတွေ၊ Lazy Club တီးဝိုင်းရဲ့ လက်စွမ်း ပြချက်တွေနဲ့ စတင် အသက်ဝင်လာခဲ့ပါတယ်။
အစီအစဉ် တင်ဆက်သူတွေ အဖြစ် ဆောင်ရွက်ကြတဲ့ မေတ္တာနဲ့ ကုသိုလ် တို့က ရှေ့ကို ကြိုထွက်ပြီး ပရိသတ်ကို နှုတ်ခွန်း ဆက် စကားတွေ ပြောဆိုကြပါတယ်။
“မြန်မာမှတ်ပုံတင် ကိုင်ပြီး မြန်မာလူမျိုးအဖြစ် ယနေ့အချိန်အထိ ရှိနေတာကြောင့် လေးစားတဲ့ အနေနဲ့ ဒီနေ့ အစီအစဉ် တင်ဆက်တဲ့ စင်မြင့်မှာ ပုဆိုးနဲ့ တိုက်ပုံ ဝတ်ဆင်ဖြစ်တယ်” လို့ မေတ္တာက ပရိသတ်ကို ပြောပြပါတယ်။
ဒါ့အပြင် မေတ္တာနဲ့ ကုသိုလ်ဆိုပြီး တွဲဖက် တင်ဆက် ရတာကလည်း နာမည်အနေနဲ့ ဆန်းကြယ်မှု တခုပါလို့ ဆိုပါတယ်။
အစီအစဉ် တင်ဆက်သူတွေရဲ့ နှုတ်ခွန်းဆက် စကားတွေ၊ ဟာသပြက်လုံးတွေ အပြီးမှာတော့ ရှိုးပွဲစင်မြင့် ဘေးနှစ်ဘက်မှာ ပြထားတဲ့ ပရိုဂျက်တာကနေ ရထားကြီးတစင်း မောင်းနှင်လာတဲ့ပုံ စပြပါတော့တယ်၊ နောက်တော့ တီးလုံးသံတွေ စတင်ပြီး တိုက်ပုံနဲ့ ပုဆိုး ဝတ်ဆင် ထွက်လာတဲ့ လားရှိုးသိန်းအောင်က “ခုတ်မောင်းလာတဲ့ ရထားတစင်း” ဆိုတဲ့ သီချင်းနဲ့ ပရိသတ် တွေကို စတင် ဖျော်ဖြေပါတော့တယ်။
ပြီးတဲ့နောက်မှာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၃၀ ကျော် လောက်ကတည်းက အောင်မြင်လာခဲ့တဲ့ သီချင်း ၃၊ ၄ ပုဒ်ကို ဆက်တိုက် သီဆိုခဲ့ပြီး နာမည်ကြီး နိုင်ငံခြား သီချင်းတပုဒ်ဖြစ်တဲ့ Before the Next ဆိုတဲ့ သီချင်းကို ဟာမိုနီလိုက်ဆိုပေးတဲ့ အမျိုးသမီး တေးသံ ရှင်တဦးနဲ့ အတူတွဲဖက် သီဆိုသွားပါတယ်။
လားရှိုးသိန်းအောင်က အရင်က နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ သီချင်းတွေဖြစ်တဲ့ ဆည်းဆာအလှနဲ့ ကိုယ့်ဘဝ၊ လားရှိုးသိန်းအောင်၊ စက်ခေါင်းအမှတ် ၀၀၉၊ တောင်ကြီးဧည့်သည်၊ ပန်းဘုရင်မလေး၊ လယ်သူမလေး စတဲ့ သီချင်းတွေအပြင် နိုင်ငံခြား သီချင်း တွေနဲ့ သူသီဆိုခဲ့ဖူးတဲ့ သီချင်းတချို့ကို မြန်မာသံစဉ်အပြင် တရုတ်ဘာသာ၊ ရှမ်းဘာသာ၊ အင်္ဂလိပ် ဘာသာတွေနဲ့ ထည့်သွင်း သီဆိုသွားပါတယ်၊ သီချင်းတချို့မှာလည်း သူရောက်ခဲ့ဖူးတဲ့ နေရာတချို့က ဘာသာစကားတွေဖြစ်တဲ့ ယိုးဒယား ဘာသာစကား၊ ချင်းဘာသာ၊ ကချင်ဘာသာတွေ နဲ့လည်း သီချင်းတွေမှာ ထည့်ပြီး သီဆိုခဲ့တယ်။
လယ်သူမလေး သီချင်းဆိုပြီးတော့ ခဏနားချိန်မှာ မေတ္တာနဲ့ ကုသိုလ်တို့ ပြန်ဝင်လာပြီး သီချင်းအပေါ် အရွှန်းဖောက်ပါတော့ တယ်။
လူရွှင်တော်မေတ္တာက “သူ နိုင်ငံခြားသွားတုန်းက မသိလိုက်တာဖြစ်မယ်။ မြန်မာမှာ လယ်သူမလေးတွေ မရှိတော့ဘူးလေ။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ လယ်ယာမြေတွေ အသိမ်းခံနေရလို့ပါ” ဆိုပြီး ပြောပါတယ်။
ခုတ်မောင်းလာတဲ့ ရထားတစင်းဆိုတဲ့ သီချင်းအတွက် ပွဲစစချင်း ပရိုဂျက်တာမှာ ရထားတစင်း မောင်းနှင်လာတဲ့ ပုံစံကို ပြသခဲ့ရတဲ့အပေါ် ရန်ကုန်မှာ ကျောက်မီးသွေးအသုံးပြုတဲ့ ရထားစက်ခေါင်းကို ရှာလို့မရကြတာနှဲ့ရှိတဲ့ မြို့ပတ်ရထား နဲ့ပဲ MTVလေးတခု ဖန်တီးခဲ့ရတယ်လို့ တင်ဆက်သူတွေက ဆိုပါတယ်။
ပရိသတ်တွေက လားရှိုးသိန်းအောင် ဖျော်ဖြေနေချိန်မှာ သီချင်းသံတွေနောက် စီးမျောပြီး တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက် နေကြခဲ့ပေမယ့် တင်ဆက်သူတွေရဲ့ အရွှန်းဖောက်မှုတွေအပေါ်မှာတော့ ရယ်မော သဘောကျနေကြပါတယ်။ လျှပ်စစ်မီးပန်းငယ်တွေ ကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ အမျိုးသမီးတစုက သူတို့နှစ်သက်တဲ့ သီချင်းတချို့ကို သီဆိုပေးဖို့ ပွဲတောင်းနေတာလည်း တွေ့ရတယ်။
တကိုယ်တော် ဖျော်ဖြေပွဲဖြစ်တာကြောင့် လားရှိုးသိန်းအောင်က သူငယ်ငယ်ကတည်းက ခံစားချက်တွေကို ရေးစပ်ခဲ့တဲ့ သီချင်းတွေအကြောင်း ပြောပြလိုက်၊ ဆိုပြလိုက်၊ နားလိုက်ဆိုလိုက်နဲ့ အပိုင်းခြောက်ပိုင်းကို သီချင်းပေါင်း ၃၄ ပုဒ်ကျော် ဖျော်ဖြေခဲ့ ပါတယ်။
အသက် ၆၀ ကျော်ပြီဖြစ်တဲ့ လားရှိုးသိန်းအောင်ဟာ ည ၇ နာရီခွဲလောက်ကနေ သန်းခေါင်ယံ ၁၂ နာရီလောက်အထိ တကိုယ်တော် သီချင်းပေါင်း များစွာနဲ့ ဖျော်ဖြေခဲ့ပေမယ့် ပရိသတ်တချို့ကတော့ သီချင်းတွေ အများကြီး ထပ်ပြီး နားထောင် ချင်သေးတယ်လို့ မတိုးမကျယ် ပြောဆိုနေကြပါတယ်။
ည ၁၂ နာရီ လောက်မှာတော့ ရန်ကုန်မှာ ပထမဆုံးအကြိမ် အဖြစ် ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ လားရှိုးသိန်းအောင်ရဲ့ တကိုယ်တော် ဖျော်ဖြေပွဲကြီး ပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်။
ရှိုးပွဲပြီးသွားခဲ့ပေမယ့် အိမ်အပြန် ပရိသတ်တွေကတော့ လားရှိုးသိန်းအောင် ဆိုပြသွားတဲ့ သီချင်းတွေကို ညည်းလိုက်၊ တင်ဆက်သူတွေ အရွှန်းဖောက် တာတွေကို ဟာသ အဖြစ်ပြောလိုက်၊ ရှိုးပွဲကွင်းပြင်မှာ ရောင်းချတဲ့ စားသောက်ဆိုင် တွေမှာ ဝယ်ရတဲ့ အစားအသောက် စရိတ်တွေအပေါ် ဝေဖန်လိုက်နဲ့ လူစုကွဲကုန်ကြပါတယ်။
မေတ္တာဂေဟာက အစွန့်ပယ်ခံ ဘိုးဘွားများ
တကောင်းတောင် စီမံကိန်းနှင့် ဒေသခံများ၏ ဒုက္ခ
ပြည်သူကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်တဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ ဖြစ်စေချင်
မြန်မာ့ ပညာရေးအတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေသူ ဒေါက်တာသိန်းလွင်
5 Responses	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website Linyone January 23, 2013 - 9:20 am	Congratulations! Ko Jimmy is the father of modern stereo music of Burma. Nobody can deny that. He isasenior citizen now but his talent and his love of music still remain young and energetic. I drove down to Houston recently but Ko Jimmy was nowhere to be found. I later found out that he was traveling to Burma. I feel great and happy as he is now visiting where he created modern music to the Burmese citizens. God bless you, Ko Jimmy.
Reply	Linta January 24, 2013 - 4:26 pm	Don’t you have his contact number?I don’t think he can see your comment.
Reply	Ko Latt January 25, 2013 - 9:08 pm	– နောက်တော့ တီးလုံးသံတွေ စတင်ပြီး တိုက်ပုံနဲ့ ပုဆိုး ဝတ်ဆင် ထွက်လာတဲ့ လားရှိုးသိန်းအောင်က “ခုတ်မောင်းလာတဲ့ ရထားတစင်း” ဆိုတဲ့ သီချင်းနဲ့ ပရိသတ် တွေကို စတင် ဖျော်ဖြေပါတော့တယ် – သီချင်းအမည်မှားနေပါတယ်။ အမှန်က ” မင်းတို့ အကြောင်းမဟုတ်ဖူး ” ဖြစ်ပါတယ်။ သေချာစေချင်ပါတယ်။ ရမ်းမတုတ်သင့်ပါ။
Reply	lhdfy January 26, 2013 - 8:44 pm	အကိုကြီးက သမ္မတကြီးကို ကျေှးဇူးတွေ သိပ်တင်နေတယ်။
ရှင်းနေတာတွေကို ရှုပ်အောင်လုပ်ပြီး၊ ပြန်ရှင်းပေးလိုက်ရင် ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တယ်။ ဆိုတာ တကယ်မှန်တာပဲ။
Reply	shona miah February 2, 2013 - 4:18 pm	It takes me back to the days of the lore when Burmese rock was toddling. It’s also heartening to know that Lasho Thein Aung has handed over his musical talent and his message of the romantic into the hearts of the millions of Burmese new generation who can feel as happy as him. Wishasmooth sail, Lasho …